कोरोनाको कारण एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
बैशाख २७, २०७८, ११:५३ PM
जनकपुरधाम, वैशाख २७ गते । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले परीक्षा गराउन सम्भव नभएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन ।
बोर्डले यसअघि एसईईको जेठ १३ र कक्षा १२ को जेठ २६ गतेबाट परीक्षा लिने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अबको १५ दिनभित्र बोर्डका सदस्यहरुले परीक्षा मोडल तयार गरेर बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने र त्यही अनुसार परीक्षा मोडल सार्वजनिक गर्ने डा. पौडेलले जानकारी दिए ।